News Code : 722688
အေမာမ် ဂျအ်ဖရ်ဆွာဒစ် (အ.စ)မိန့်တော် မူသည်။
အဓိပ္ပာယ် ။ ။ မိုးကောင်းကင် အနေဖြင့် အေမာမ် ဟိုစိန် (အ.စ) အတွက် ရက်ပေါင်း ၄၀ သွေးမိုး ရွာ သွန်းခဲ့လေသည်။
ကျမ်းကိုး - مناقب آل أبي طالب ، ج ۳ ، ص ۲۱۲
အေမာမ်ဟစန် အစ္စကရီ (အ.စ) မိန့်တော်မူသည်။
အဓိပ္ပာယ် ။ ။ မိုပ်မင်၏ လက္ခဏာ ငါးပါးရှိပါသည်။ … ၎င်း လက္ခဏာ ငါးပါးထဲ မှ တစ်ပါးမှာ ဇေယာ ရသ်သေ အရ်ဗအီးန် ဖြစ်ပါသည်။
ကျမ်းကိုး - تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۵۲
ဗေဟာရွလ်အန်နဝါရ် ကျမ်း အတွဲ ၄၅ တွင် ဆယက်ဒ် အေဗ်နေသွာဟူးစ် (ရ.ဟ) မှ တဆင့် လာ ရှိပါ တယ်။
لمّا رَجَعَت نِساءُ الحُسَينِ‏عليه السلام و عِيالُهُ مِنَ الشّامِ و بَلَغوا إلَي العِراقِ قالُوا لِلدَّليلِ : مُرَّ بِنا عَلي طَريقِ كَربَلاءَ فَوَصَلُوا إلي مَوضِعِ المَصرَعِ . . . وَ اجتَمَعَت إلَيهِم نِساءُ ذلِكَ السَّوادِ و أقامُوا عَلي ذلِكَ أيّاماً
အဓိပ္ပာယ် ။ ။ အကြောင်းမှာ အေမာမ်ဟိုစိန်(အ.စ) ၏ ကြင်ယာတော်များ နှင့်အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) ဆီးရီးယား မှ ပြန်ရောက် ခဲ့ကြသည်။ ပြီးနောက် အီရတ် သို့ရောက်ရှိလာပါသည်။ လမ်းပြ ကို ပြောကြာလေ၏။ ကျွန်ုပ်တို့ကို ကရ်ဗလာ သွားတဲ့ လမ်းကနေ ခေါ် သွားပေးပါ။ (အေမာမ် ဟိုစိန် (အ.စ) သာဝကတော်များ) ရှဟီးဒ် ဖြစ်ခဲ့သည်နေရာကိုရောက်ခဲ့လေ၏။ … ထိုအချိန် ထိုနေရာမှ အမျိုးသမီးများအနီးတွင် စုရုံးသွားကြလေ၏။ ပြီးနောက် ရက်အချို့ အဇါဒါရီ ပြုလုပ်ကြလေ၏။
ကျမ်းကိုး - بحار الانوار ، ج 45 ، ص 146
ဗေဟာရွလ်အန်နဝါရ် ကျမ်း အတွဲ ၄၈ တွင်လာရှိပါသည်။
အဓိပ္ပာယ် ။ ။ ဂျနာဗေဂျာဗေရ် သတိလစ်၍ ကဗရ်မိုဘာရတ်က် (အေမာမ် ဟိုစိန် (အ.စ) အပေါ် သို့ ပြုတ်ကျလေ၏ ။ ၎င်းမျက်နှာ ကိုရေ ဖြင့် ပက်ဖြန်းခဲ့ပါသည်။ (၎င်း) သတိပြန်လည်လာ၏။ထိုအချိန် သုံးကြိမ် သုံးခါ ယာဟိုစိန် (အ.စ) ဟု တမ်းတလေ၏။ ပြီးနောက်ပြောလေ၏။ မိတ်ဆွေ ဟာမိတ်ဆွေ အတွက် အဖြေ မပေးဘူးလား ? ထိုအချိန် အဖြေထွက်လာ ၏။ ဘယ်လိုလုပ်ပြီးအဖြေ ပေးရမည်နည်း ဦးခေါင်းနှင့် ကိုယ် တခြားစီ ဖြစ်နေပေပြီး ။
ကျမ်းကိုး - بحارالانوار ، ج 68 ، ص 130
သတိပြုဖွယ်မှတ်ချက် - ရစူလ် (ဆွ) ၊နှင့်အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) သည် မည်သည့် အခြေ အနေတွင် ရှိနေရှိနေ (အသက်ရှင်လျက် (သို့) ရှဟီးဒ် ဖြစ်ပြီး)နောက် ကျွန်ုပ်တို့ ၏ တမ်းတမှု နှင့် စလာမ် ကို အဖြေပေးနိုင်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့ အဖြေပေး နိုင်ရန်လည်း အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် သခင်ဖက်မှ ရစူလ် (ဆွ) နှင့်အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ)အား အခွင့် ပေး ချီးမြှင့် ပေးသနား ထားတော်မူ ပေသည်။ အထက်ပါ ဟဒီးစ်တော်တွင် အေမာမ် ဟိုစိန် (အ.စ) ခေါင်းဖြတ် လုပ်ကြံ ခံရခြင်း ၊ပြီးနောက် ခေါင်းတခြား ကိုယ်တခြား ထားပြီး မဇ်လူးမ် ဖြစ်မှု ကို ထင်ရှားစေရန် အတွက် ဖော်ပြ ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။